Ikhabhathi epholileyo kwi-45 acre meadow + ehlathini eLake Wpg
Indawo epholileyo yokubuyela eMatlock, eManitoba kunxweme olusemazantsi-ntshona eLake Winnipeg. Ifakwe ngokupheleleyo, igumbi elinamagumbi amabini okulala, lilala 3-4. Ifakwe kwindawo yokugcinwa kwendalo eyi-45-acre, eneendlela ezinqumla kwithafa lengca ende, idlelo, ihlathi, imigxobhozo, amachibi, i-labyrinth yokucamngca, ubugcisa bomhlaba, nokunye. Uhambo lwemizuzu emibini ukuya elunxwemeni oluphambili, indawo yokutyela, ivenkile kunye neenkundla zemidlalo. Izinto ezenziwa unyaka wonke ziquka ukuqubha, ukukhwela isikhephe, ukuloba, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela iintaka, ukuloba emkhenkceni, ukutyibilika ekhephini, ukutyibiliza, ukutyibiliza ekhephini, ukutyibiliza ekhephini, ukutyibiliza ekhephini.
Ikhabhinethi ibekwe kwindawo entle yolondolozo lwendalo oziihektare ezingama-45 kwaye ikufuphi kanye nedolophu yaseMatlock apho kukho izinto ezininzi eziluncedo ezibandakanya iilwandle ezibukekayo kunxweme olusemzantsi-ntshona weLake Winnipeg. Kukho indawo eninzi yokupaka izithuthi zakho, oomatshini bekhephu, izikhephe kunye nezinye izinto zokudlala kanye ecaleni kwekhabhathi. Ukufikelela echibini ngemoto, ngenqwelo-mafutha ekhephu okanye ngesikhephe kukumgama nje ongumzuzu. Sebenzisa i-fryer yethu enzulu kunye ne-barbecue kunye nepropane ebonelelweyo kwindawo enkulu ejikeleze idesika. Ukugcinwa kwendalo ngamachibi, amahlathi, amadlelo, ubugcisa bomhlaba, i-labyrinth nokunye, kunika amava amangalisayo angaphandle. Ikhabhinethi inazo zonke izibonelelo oya kuzifuna ekhitshini, kwigumbi lokuhlambela nakumagumbi okulala. Kukho ibhedi ekhululekileyo ephindwe kabini kwigumbi lokulala eliphambili, ibhedi enkulu egobileyo kwigumbi lokuhlala, kunye nebhedi enkulu kwigumbi lokulala elisecaleni elinoomatrasi abancinci abancinci abalungele abantu abangaphantsi kweenyawo ezi-6 ubude.
IMatlock yindawo encinci, epholileyo kwaye ezolileyo. Ngamakhulu ambalwa abahlali bonyaka wonke, yindawo yokuphumla enoxolo unyaka wonke. Ngexesha lasehlotyeni, iMatlock Pond Cabin ikhutshelwe kude kwiindlwana ezixakekileyo zamaxesha onyaka, ibonelela ngemfihlo noxolo. Ukanti, izinto ezinomtsalane kunye nezinto eziluncedo zifikeleleka ngokulula; Ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni oluphambili, indawo yokutyela, ivenkile yekona kunye neenkundla zemidlalo. Ngeenkonzo ezongezelelweyo ezibandakanya igrosari, iindawo zokutyela ezininzi, ivenkile, nokunye okuninzi; idolophu enkulu yeGimli yimizuzu engama-20 ukuya emantla. Kunye nedolophu encinci yaseWinnipeg Beach ekwanezinto ezininzi zokhenketho kunye neenkonzo, imizuzu nje eli-10 emantla eMatlock (kwindlela eya eGimli).
Sithanda ngokwenene ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo bazo kwaye ke asizi singamenywanga kwindlwana. Sinobubele kwaye siyakonwabela ukudibana nabantu abatsha, ngoko ke ukuba ungathanda ukuthi sibulise, vele usithumelele umyalezo kwaye siza kudlula.
Sithanda ngokwenene ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo bazo kwaye ke asizi singamenywanga kwindlwana. Sinobubele kwaye siyakonwabela ukudibana nabantu abatsha, ngoko ke ukuba ungat…